Wasiirka waxbarshada Dowladda faderaalka oo sheegay dowladda Kuweit inay ka heleen balan qaad waxbarsho – Radio Daljir
Wasiirka waxbarshada Dowladda faderaalka oo sheegay dowladda Kuweit inay ka heleen balan qaad waxbarsho
Maajo 16, 2012 12:00 b 0
Muqdisho, May 16 – Wasaaradda waxbarashada ee dowladda faderaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahiyay shir muhiimadiisu ay ahayd kor u qaadida waxbarshada oo uu kaga soo qabgalay dalka Kuweit oo dhowaan uu kasoo laabtay, kadib markii booqasho uu ku tagay.
Dr Axmed Ibraahim Caydiid wasiirka waxbarshada ee dowladda KMG ah ee Soomaaliy ayaa sheegay dowladda Kuweit inay balan qaaday tababaro inay u fidiso macalimiin Soomaaliyeed.
Waxaa uu wasiirku tilmaamay madaxda dowladda Kuweit inay u gudbiyeen baahiyo wasaaradiisu ay ka qabto dhinaca waxbarshada dalka, loona baahanyahay dowladda Kuweit inay Soomaaliya ka taageerto dib usoo celinta goobihii waxbarsho ee dalka.
Wasaaradda waxbarshada ee dowladda faderaalka ayaa xiriir wanaagsan la yeelatay wasaarado waxbarsho oo caalamka ku yaala, kuwaasi oo qaarkood fursado waxbarsho siiyay arday Soomaaliyeed, inkastoo ay weli jirto dhaliilo wasaaradda loogu jeedinayo qaabka ay u maaraysay deeqaha waxbarsho oo ay caalamka uu siiyo.
Cutub ka mid ah ciidamada AMISOM oo gaaray Baydhabo
Baahin: Salaasa, May 15, Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Maxaa sababay in Issimada Puntland ee ka qayb galayey shirka madax dhaqameedka Somalidu ay ku soo laabtaan Garowe? Wasiir al dawlaha dastuurka ee dawlada federaalka ah oo beeniyey in Issimada Puntland ay Garowe ku laabteen; Iska-horimaad khasaare dhimasho & dhaawacba leh oo ka dhacay Hargeysa; Kuwait oo deeqo waxbarasho & tababaro macallimiin u fidisay Somaliya; Wasiirka waxbarashada ee dawlada federaalka ah oo ka hadlay.